Dabuub Gabay: Qamaan Bulxan
Gabaygii 2aad ee Silsiladdii Rayad ahna gabaygii 1aad ee Qamaan Bulxan
Gabaygii Diradiraale ee Cali-dhuux ayaa dhinac walba u dabayshaday. Qamaan Bulxan oo Cali or iyo jiib yaqaanay ayaa u jawaabay oo Silsiladdii Rayad soo galay. Gabayga Qamaan mar waa xaajo, mar waa garaabid, mar waa goodi, mar garashada iyo garaadka Cali-dhuux ayuu la yaaban yahay marna diradiraalaha Cali-dhuux ayuu farta ku fiiqayaa. Mar kale Qamaan wuxuu sheegay haddii aan Ingiriis baardaajinaynin inaan Isaaq Ogaadeen la ekeekameen.
Qamaan wuxuu Cali-dhuux ku gawriyey inuu diradiraalaha dhaafo haddiise uu cagta u dhigiwaayo in isaga uun ay la ciiri doonto. Wuxuu caddeeyey in Ogaadeen siijeedkiisa dad badani ku dagmi doono iyo in Cali-dhuux doqonimo awgeed uu Isaaq guddoonsiiyey guulo badan oo aysan soo hoyinin.
Wuxuu ku dooday in Isaaq xididnimo, asluub iyo daris wanaag ku degan yahay Doollo deyrna u yahay habar dugaag iyo Harti, dhul ay qaateen ama durugsadeenna uusan jirin. Haddiise Ogaadeen iyo Isaaq dagaalamo waxa aad Caliyow ka helayso ayaan garan waayey, ayuu sii raaciyey.
Duullaankii Hagoogane la baxay ee Ingiriis iyo cawaamkiisba ku saareen Ogaadeen iyo Daraawiish iyo geelii duulaanka lagu soo qaaday inay Habar Yoonis iyo Dhulbahantihii Ingiriiska la socdayba, sida Reer Hagar iyo Cali-geri qaarkii, ahaayeen kuwii ka qayb qaatay dakanadaasina meel u taalo, gabaygiisuna uu daacadda ka fog yahay, ayuu ku dooday. “Gacantii wax qaadka taqaan gumudkaa dhaqdhaqaaqa” oo waad naga cabsanaysaa ee haddii sidaad sheegtay xaalku yahay adiguba nama aadan dayseen ayuu ku gujiyey. Wuxuu xusay in geesiyadii ugu magac dheera Dhulbahante Isaaq laayey, Dhulbahantena dhulkoodii ay Habar Jeclo ka faramaroojisay, maganna ay aqalkoodii ku yihiin.
Wuxuu ku goodiyey in Ogaadeen oodda soo jabiyey, adduunna rogi doono. Wuxuu ku ceebiyey Cali-dhuux inuu yahay nin Daarood kalagurkii iyo Dhulbahante dakanadii ku caanbaxay sida marka Qamaan leeyahay “dalkaad ina adeerkaa dhigtaad, wali degaysaaye.” Iyo inaan Qamaan hadalka loo dusinkarin, Cali iyo isbihinbihintiisana uu aad u yaqaano kana aragti dheeryahay.
Caynaba maad soo dhicisid haddaad tabar hayso ama maad tolkaa gabayga ku guubaabisid haddaad raganimo leedahay ayuu ku dacwiyey. Ingiriis haddii uu i dilay saw Isaaq iyo Dhulbahanteha Ingiriiskaa la socda iska kay daliilaysan mahayaan, sida aarku kolkuu raqda ka noolaado ay dawacada iyo haaddu u feenfeentaan wixii meesha ku hadhay.
Qamaan wuxuu isticmaalay luuqad aad u saraysa oo maahmaah iyo murti leh. Halqabsiyo badan oo gees walba Soomaaliya laga isticmaalo ayaa gabaygan kasoo jeeda. Wuxuu yidhi:
Caliyoow dabuubtaadi gabay, daayinkaa wadaye
Dabaylaha xagaagee dafliyo, daafigaa sidaye
Noo dooji doogiyo sidii, dararta xolaadde
Diirkiyo laftuu xulay hadduu, hadal wax daaweyne
Dadkana uma sinnee reer tolkay, dacar ku nooleeye
Anna waan ku diirsaday, Ilaah derajo siiyoowe
Daaraan garbaha qoon hulaad, damaqday Dhuuxoowe
Dibirrooti buu dhacay, raggaad dabaqadayseen
Waa gobol dillaacid iyo ciil, dibinta ruugaaya
Iyo gobol runduda oo fadhiya, dagada weeyaane
Dulkaa jooji waan kula dacwiyi, doodna waan odhane
Dabbaad ololisaa kumana gubo, daa'in abidkaaye
Intaad dogob shiddaa baad taqaan, diradirayn jaane
Haddayse daacad xaajadu tahoon, lagu denbaabaynin
Danbaaburada naareeed haddaan, dhinacu doonaynin
Seeddoow maxaad noogu digan, dakharku waa kiinne
Goormayse degmadu noo miyeen, dawgalbaa jira e
Daldhacsiga danaasaca la mood, dawr inaan ahaye
Is dalleemintaydaa ninkii, dagani eedaaye
Dubihii ku dhacay Ina Barwaaq, dagi aad maysaane
Daaduunka caydheed raggaa, dibbadda meeraaya
Docmo iyo Hartaa lagu ogaa, dalawadoodiiye
Cali-gerigaa daadhiib shalay, naga durduurteene
Waa kaa darfiyey caanihii, dagiyo heemaale
Anna waxan dibiray waa dagaag, dayrar soo xulaye
Nimay gacantu daabulo tiqiin, beri hadduu daayo
Uu yara dalleensado intii, ducasan loo yeelo
Dambanmahayo waagay xubnuhu, yara dubaaxshaane
Inaad deysid beel dagan adoon, dani ku seetaynin
Hadday debecdo waw hiiliyaa, doqon walaalkeede
Diiftiyo ushay garan intaad, dayada haysaane
Dunna haddaadan ii tarin maxaad, iigu dana sheegan?
Dooyaha fardaha maalintaad, deleb ku qaadaysey
sidii duul Amxaara ah markaad, nagu dabraynaysey
Intaad haatan ii laba dublayn, muu damqado jiidhku?
Daarood Ismaaciil ahaan, hilibku muu diiro?
Toorida ninkii kuu dadbee, daabku uu celiyey
Dakanadayda yaa kaa xigood, igu danayn haatan?
Aar soo dibjirey neef hadduu, daacuftii geliyo
Uu kaga digsiiyuu ilkaha, dhiigga kaga daadsho
Dugaaggaa yaryari saw ka cuna, duufka hadhay maaha?
Aday dilaye goormaa Isaaq, Doollo iga qaaday?
Maxaa godobtii Daarood lahaa, dabacayuun siiyey?
Hadday Dibbixul uga heesayaan, Daharba waan siine
Miyey haatan daab iyo ul iyo, kaga cabbaan dawlis?
Bulsho daalis oo dibi dhaloon, loo danbarinaynin
Oo kii lahaa diidey bay, sidigtii doontaaye
Kuwan derisnay dooxeer haddaan, sebenka daaduunsho
Waxa adiga duug kaaga noqon, yayga degi waayey!
Gabdhaha doonnan dadabtaan dhisniyo, xidid dariiqaynta
Kuwaan dihannay diricay dhaleen, waa dareeemada e
Muslinka hayga didin yaan Ibleeys, dawyo kaa ridine
Darka jabay dillaalkiyo dhulkuu, dabadku meeraayo
Deeqii Illaahay halkuu, xuliyey daadkiisa
Ii daa dugaagiyo Hartay, igaga deyraanne
Iidoor Dir weeyee hadduu, duulan soo kiciyo
Dunji Habar Magaadluhu hadduu, dabarka soo qaato
Dunbuq iyo rasaastana hadduu, debecsanuhu siiyo
Ogaadeen ka daan iyo ka daan, Doollo soo gudubye
Diinkaan akhriyey way iman, Dooy raggii jiraye
Dunji maalintaa waxaad qabtaan, waan u daahirinne
Ma demmaniye deynkayga, waan dabagelaayaaye
Dagaallama rag doorkii la laa, duubcaddii Hagare
Ama na daaya waan wada qabnaa, daawashiyo ceebe
Ma dumaalo naaguhu ninkay, nolol ku dayrshaane
Dayib uma yidhaahdaan jeeroo, hawli daashado e
Nin walaalkii doorsaday Ilaah, derejo siin waaye
Dalkaad Ina-adeerkaa dhigtaad, weli degeysaaye
Adna gabayga waad nagu danqiye, daacaddii maqane
Dubkaa nagaga kaa yaal, haddii lagugu deyrshaaye
Dilaal iyo malaal wuxuba waa, carabta deynkoode
Dibnihiinna uunbaan galoo, way dudubiseene
Allay diliye Iidoor adaa, iiga sii darane
 Docmo: Ceel Koonfur Bari Laascaanood kaga aadan, haatanse degmo ah
 Harti: Harti Koombe. Laf lafaha Daarood ka mid ah
 Saddexdaa meeris ee kore wuxuu Qamaan ujeedaa haddii Daraawiish oo mar ah iyo Ingiriis oo mar kale ah Ogaadeen galay oo dhacay Habar Yoonis iyo Dhulbahante oo uu ku tilmaamay dugaag yaryar sow ka faa’iidaysan mahayaan oo Ogaadeen iska fadhataysan mahayaan
 Dibixul: Balli waqooyi bari magaalada Qabridahare kaga aadan
 Dahar: Qabridahar, xarunta gobolka Qorraxey ayuu ujeedaa
[ Habar Magaadley: Isaaq badhkii ayuu magacaasi kulmiyaa. Habar Yoonis iyo Habar Awalba waa ka mid
 Caynaba: Ceelka ugu caansan uguna biyo badan ceelasha degaanka Cayn loo yaqaano. Degmo ayuu gadaal ka noqday. Degaanka Dhulbahante ayuu ugu hodansanaa dhulkaasi, maantase Habar Jeclo ayaa danbaabta
 Dayib: eray asalakiisu Af Carabi yahay oo la macne ah ‘hagaag’ ama ‘waayahay’
 Colaadii Reer Hagar iyo Cali-geri u dhaxaysay ayuu ujeedaa